MUQDISHU- Warsaxaafadeed kasoo baxay dowladda Somalia, ayaa looga hadlay dhacdadii dhawaan qabsatay wafdi uu hogaaminay Ra'isal wasaare Cumar Cabdirashiid kuwaasi oo kusii jeeday dalka Turkiga balse lagu xannibay Nairobi.
Qoraalka kasoo baxay xukuumadda Somalia, ayaa lagu sheegay inay kaxunyihiin falkii dhacay, iyagoo kadalbaday Kenya raali galin iyo wixii kallifay in falkaasi lagula kaco wafdi heerkiisu sareeyo.
Hoos ka akhriso qoraalka kasoo baxay dowladda Somalia oo qaabkan hoose u qornaa
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay aad uga xuntahay dhacdadii ka dhacday garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi, halkaas oo ay Transit ku ahaayeen wafdi uu hogaaminayay Ra´iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Mudane Cumar Cabdirashiid Sharmarke oo ku wajahnaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga si ay uga qeyb galaan shirka heerka sare ee wadatashiga Istanbul, (HLPF).
Tallaabadan, ayaa timi xilli dowladda Kenya ciidamo nabad ilaalin ah kajoogaan Somalia islamarkaana uu jiro xiriir labada dhinac ka dhaxeeya.
​Istanbul: Shirk arrimaha Somalia oo fumray
Soomaliya 23.02.2016. 12:26
ISTANBUL- Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyib Erdogan, ayaa goor dhaweyd si rasmi ah u furay shirka looga hadlay arrimaha Somalia gaar ahaan amniga iyo siyaasadda.
Kulankan oo kafurmay magalada Istanbul, waxaa ka qeyb galaya Madaxweynaha Somalia Xasan Sh ...
Dabley hubeysan oo Lix qof ku dishey Woqooyiga dalka Kenya
Caalamka 01.07.2016. 16:16
​5 katisan ciidanka Kenya oo Mandheera lagu dilay
Caalamka 20.06.2016. 16:55
​Hishiis dayn cafin ah oo dhexmaray DFS iyo IMF
Soomaliya 07.04.2016. 18:56
​Taliye nabad sugidda katirsan oo Cadale lagu dilay
Soomaliya 06.03.2016. 09:23